Adeerkay iyo Adeerkaa: Maxaan xisbi ugu biiri waayay? W/Q: Mohamed Omar (Sammo) |
Adeerkay iyo Adeerkaa: Maxaan xisbi ugu biiri waayay? W/Q: Mohamed Omar (Sammo)
Qiyaastii waxay ahayd mudo laga joogo 4 sano. Waxa aannu kasoo dareernay shir beeleed hoose oo u gaar ahaa jifadayada. Waxa shirka marti noogu ahaa masuul ka mida masuuliyiinta reerka oo warbixin na siinaayay iyo is xaal waraysi guud oo ku saabsan siyaasada Soomaaliland. Arimaha laysla jeex jeexay waxa ka mid ahaa halkee halkan la joogo looga sii kacayaa, mar haddii ururkii reerku hadhay. Walow masuulka noo waramayay aanu isagu marnaba nagu cadaadineen meesha aanu taageeradayada geenayno, hadana wuxu noo hoga tusaaleeyey meesha uu isagu umaleynaayay in khayr ku ku jiro. Waa meesha isaga danta u ahayd! Durtaba waxa laga yaabaa in aad maskaxda ka dhex raadineyso cida reerkaasu/qabiilkaygu yahay? Ha iga degdegin anaa kuu balan qaadaya haddii, in uun, ayku anfacayso ogaanshaha reerkaygu in aan kula wadaagee.
Shirkii aan caadiga ahayn ee haldoorka reerkayagu kula arinsanayaanay masuulkaas wuxu soo geba gaboobay xili ku beegneed 12 habeenimo iyo malaha wax la jira. Waa London goobtu, gaar ahaan Galbeedka London. Xili jiilaal ah baa lagu jiray oo dabcan ah xiliyada London ugu qabow. Masuulkii waxa lagu qaaday gaadhi Mercedes ah oo uu watay wiil aannu ilma adeeer ahayn. Ragii kale nin waliba dhankii gurigiisu ka xigay ayuu u jiheestay. Wakhtiyadaas waan ku cusbaa anigu qurbaha. Maan wadan gaadhi, waana xili dambe oo badanka gaadiidka dawladu waa istaagaa (gaar ahaan tareenada). Mid ka mid ah ragii adeeraday oo aannu meel isu dhow degeneen ayaa iigu bushaareeyey in uu isii qaadi doono. Hoosta ayaan uga duceeyey, waxa aanan shidhka hore u galay gaadhigii adeerkay. Xagaas iyo waxa aannu u jiheesanahay dhankiii degmada aannu deganeyn.
Intii aanu gaadhiga sii saarneen waxa na dhex maray aniga iyo adeerkay sheeko aad u cajiiba. Sheeko maskaxayda kaga tagtay xusuus ay adkaan doonto sida aan u ilaawo inta aan noolahay. Waa sheeko aan qiyaasayo in badi dhalinyarta reer Somaliland ay la soo qaateen adeeradood.
”Adeer Maxamed ka waran hawlahaagii halkay wax kuu marayaan.” ayuu adeerkay i su’aalay isaga oo raadiyowgii noo baxaayay ee gaadhiga codka yara gaabinaya.”Adeer alxamdulilaah walahay, wax waliba si wanaagsan bay iigu socdaan.”
”Reerkiina sow ma nabad qabaan adeer, gaar ahaan aabo, wuu yar xan xanuunsaday ayaan maqlee siduu yahay imika adeer.””Adeer imika wuu wanaagsanyahay.””Igu salaan adeer hadaad la hadashid.” ayuu adeerkay i faray. Intii aanan waayahay odhan ayuu hadana mawduuc kale degdeg iigu furay.
”Adeer waad aragtaa waxa dalkii ka dhacaaya. Siyaasadu halkay marayso waad la socotaa, sow maaha adeer?””Haa adeer, waan arkaa in ururkeenii aynu ku dhabar jabnay la reebay. Waan la socdaa in Siilaanyo iyo xukuumadiisu inaga eexatay.” Aniga oo aad moodid markan in dareenkaygu kacay oo dhaxantii iga yara duushay ayaan sidaas ugu war celiyey adeerkaygii aan gaadhiga la saarnaa.
Isaga laftiisa oo aad moodid markan in ay u bidhaantay fursad uu maankayga ku gato, ayaa intuu muraayadaha gaadhiga eegay, si uu u hibiyo in aanay wax gawaadhi ahi kusoo dhoween, dardaarankan isiiyey.
”Adeer Maxamed anagu hada waanagan gabownay. Wakhtigii aannu soo qaadan kareynay soo qaadanay. Dad wixii aannu la qaybsan kareynay la qaybsanay. Maanta waa idinka kuwa laydin rabo in aad qayrkiin waxla qaybsataan. Somaliland keliya waxa waxka cuni kara cida xukunka haysa. Waad aragtaa waxa uu Siilaanyo dalka ka samaynayo. Niman aan shalay shilin haysan ayaa maanta malaayiin haysta. Adeer haddii ururkii hadhay meeshii kale ee reerku ku biiraba la shaqeeya oo qaadhaanka bixiya. Nimanka lagu tashanayaa waa adiga iyo raga kale ee kula da’da ah. Dedaala adeer adiga iyo inamada kaleba.” Markuu intaas i yidhi adeerkay ayuu afka saaray wadada loo yaqaan A40 ee gasha degmada Hounslow, bariga London, oo ah halka aan degenaa waagaas. Intaa wixii ka dambeeyey wuxu kor u yara qaaday raadiyowgii noo baxaayay oo markaad uu warkii soo galay. Wuxu u muuqday nin xilkiisii gutay oo talo tii ugu wanaagsanyd i siiyey. La yaab muu lahayn adeerkay waayo, sida aan u fasirtay, keliya wuxu rabay in uu iga dhigo siyaasiga beri reerka xaqooda usoo dhicin doona! Waa sida adba adeeradaa kaa fishaan.
Habeenkii oo dhan waxa igu soo noqnoqonaayay dardaarankaas. Waxa aan isku dayay in aan fahmo cida aannu nahnay annagu? Cida xaqayaga boobaysa ee uu adeerkay i lahaa aynu iska dhicino? Waxa aan is weydiiyey, haddii xukuumad la galaa ay xaq soo dhicinayso – sida adeerkay igu wacdiyey – maxaa xaq ah oo ay noosoo dhiciyeen ragii xukuumadihii kala duwanaa ee Somaliland ugu jiray reerkayaga? Inta aan ka xasuusto xukuumad kasta oo dalka ka dhalata Wasiir derajada A ama B ah ayaa reerkayaga la siin jiray, walow mar marna loogaba badin jiray. Midkoodna hal mar inta uu reerka isugu yeedhay muu odhan waxan iyo waxaas oo aad xaq u leheedeen oo idinka maqnaa ayaan idiin soo dhiciyey. Way igu adkaatay in aan fahmo xaqa naga maqan ee adeerkay igula dardaarmay in aan u hawl galo aniga iyo inamada kaleba sidii aanu usoo dhicin lahayn? Waan iska jiifsaday aniga oo dhanna isu arka nin halyeey ah oo taladii reerka laga qayb geliyey; dhanka kalena dareemaya werwer ku aadan waxa aanan garaneyn wuxu yahay oo hadana lay faray in aan sameeyo!
Waa laga yaabaa akhriste in aad durtaba colaad u qaaday adeerkay oo aad hoosta ka leedahay, ”habaar qabe ayuu ahaa, bal muxuu waxaas inanka ugu akhriyey?” Waxan se hubaa in sida hada dardaaranka adeerkay kuula qadhaadhaaday aannu kuula qadhaadhaan adiga marka adeerkaa kula dardaarmayo. Taasu waa shaki la’aan.
Loolankii soo bixista 3da xisbi qaran ee ay Somaliland yeelan doonto 10 ka sano ee soo socda ayaa dabayshiisii nagu soo gaadhay dalka Inigriiska. Waa dhamaadkii sanadkii 2012 kii. Reer waliba wuxu furtay urur siyaasadeed! Annaga reerkayaga urur siyaasadeed koodu wuxu ahaa ururkii Umadda ee uu hogaamineyey Dr. Mohamed Abdi Gaboose. Haa waan arkaa in aad imika madaxa yara ruxday oo aad ugu yaraan fahantay qabiilkayga. Waan se hubaa in aanu waxba kuu tari doonin ogaanshihiisu. Ceeb maaha in qof ku dhaho qoloma ayaad tahay. Waxa se ceeba in marka qof ogaado qabiilkaaga, uu si ka duwan sidii hore ee uu kuu qaabili jiray si ka duwan kuu qaabilo. Waa sida aan anigu aaminsanahay.
Waxa aannu guntiga dhiisha iskaga dhignay sidii uu usoo bixi lahaa ururka Umaddu. Waa Urur siyaasadeed aanu rabnay in reerkayagu maal gashado, reeraha kalena ka dhaadhicino in Ururkani yahay ka xaqa ah ee ugu wanaagsan ee lagu aamini karo talada dalka, haddii uu so baxo iyo in Dr. Gaboose yahay ninka ugu wanaagsan ee talada loo dhiibi karo. Eesh calaa! Fariintayada ugu weyni taas ayay ahayd. Ciddii naga iibsata ee na soo raacda waanu soo dhoweeneenay, cidii nagu diidana arxan nagama dhexeen.
Dr. Gaboose shakhsiyan waxa aan u aaminsanaa in uu yahay shakhsi talada dalka ku haboon. Nin daacad ah oo masaakiinta u shaqeeya iyo nin aan lagu xaman musuq-maasuq. Haseyeeshee, sababta ugu weyn ee anigu aan wakhtigaas u rabay in uu talada qabtaa waxay ahayd maadaama oo uu adeerkay yahay! Waa sababtaas mida dabada iga riixeysay. Waxa iga dhex guuxaayay dardaarankii adeerkay gaadhiga igu dhex siiyey iyo guubaabada mar walba aan ka maqlayo odayada kale ee reerka. Sidaas awgeed waxa aan u qalab qaatay sidi aan Dr. Gaboose, intii karaankeyga ah, u garab istaagi lahaa.
Markii uu Dr. Gaboose noogu yimi UK, wakhtigayga intiisii badneed waxa aan u huray sidii aan ula ololeyn lahaa. Habeen dhax ayaan u tagnay magaaloyinka Sheffield iyo Birmingham. Tiro maleh inta aannu London gudaheeda ka ololeenay. Waxaas oo dhan waxa aan u sameenaayay in adeerkay guuleysto! Hase ahaatee may suurtoobin oo, si ay u dhacdayba, ururkii Umaddu wuu ku hadhay tartankii. Ururkii Umaddu wuxu la midoobay ururkii soo baxay ee Waddani. Ma garan karo sababta, waayo faah faahin cad namuu siin Dr. Gaboose sababta uu ugu biiray. Ma sabab reernimo mise sababo kale? Taas waxa aan ka sheegaa waa igu dembi.
Midowgii Umadda iyo Wadani waxa la ii magacaabay gudoomiyaha dhalinyarada Xisbiga Waddani ee UK. Xil aan qabashadiissa ka cago jiiday balse aan aqbalay. Hase ahaate mudo kooban kadib waa aan iska casilay xilkii, aniga oo casilaadaydii u gudbiyey Gudoomiyihii Xisbiga ee UK ee wakhtigaas, Mr. Axmed Cali Naahi. Dhaliil gaar ah iyo wax ceeba oo aan xisbiga ku arkay oo aan uga tegay ma jirin, lakin waxa aan dareemay in aan ahaa nin adeerkii la socday oo imikana xisbi kale oo siyaasi kale oo adeerkii uu hogaaminayo kusoo biiray. Sidaas daraadeed, maadama oo aanan mawqif iyo go’aan aniga ii gaara ah awgii aanan ugu soo biirin xisbiga, waxa aan jecleestay in aan debeda ka joogo. Waxa kale oo aan go’aansaday in aan siyaasada debeda ka joogo. Waa xuquuq muwaadin kasta oo dunida korkiisa ku nooli uu leeyahay in uu wax doorto, isagana la doorto. Hase ahaatee intii aan dadka isku nici lahayn adeerkay ayaa ka fiican adeerkaa, waxa aan jecleestay ina an bari ka ahaado waxa hada socda.
Markan waxa aad moodaa in xoogaa maskaxdaydu iska fur furayso xadhkigii mudada badan lagu soo xidh xidhayay ee ahaa ‘Anaga iyo Iyaga’. Waa xadhko ku xidh xidhan badi maskaxda dhalinta reer Soomaaliland. Waxa aan dareemay in aan wado khaldan ku socday. Waxa aan ogaaday in aan ahaa qof la khalday oo wado khaldan cagta loo saaray. Wado ay igu wehelinayeen wakhtigaas kumaan kun dhalinyaro, haddii aanay malaayiin gaadheynba, oo reer Somaliland ah oo sidayda oo kale caqligoodii la gatay.
Waan dareemaa in aan wakhtigaas ceeb weyn ku kacay oo aan, indho adaygayga, isku dayey in aan dadka ka dhaadhacsiiyo in adeerkay ka wanaagsanyahay adeeradood. Waxa keliya se ee aan maanta naftayda ku dejiyaa waa in aan waagaas ahaa shakshi la khalday oo aan haysan aqoon buuran oo uu wax ku kala shaandheeyo. Ayaan darada ugu weyn ee maanta ii muuqataana waa in 5 sano ka hor wadadii mugdiga badneed ee aan ku soconaayay ay maanta dhalinyartii reer Somaliland badankoodii cagta saareen.
Waa dhalinyar, ilaa imika inta aan ka arkay, leh aqoon ka badan tii aan anigu waagaas lahaa. Nasiib daro se, si ay ku dhacdayba, ay aqoontoodu gaadhsiin weyday heer ay isku weydiiyaan caqliyada odhanaysa adeerkay ayaan la safanahay oo ka wacan adeerkaa ee soo raac adeerkay. Lama yaabayo kuwooda aan aqoonta durugsan lahayn, waayo anba waagaas dadku ilamay yaabi jirin, waxase la yaableh ninka dhalinyarada ah ee ugu yaraan shahaadadii labaad ee jaamacada soo dhamaystay ee maanta adeerkii garab taagan, isaga oo aan garaneyn hal sabab oo cad oo uu adeerkii kaga wacanyahay adeerka muwaadinka kale ee siyaasiga ah.
Wiigii hore ayuun bay ahayd markii aan ka qayb galay xaflad balaadhan oo xisbiga Kulmiye laantiisa UK ay u sameesay gudoomiye Mr. Muuse Biixi Cabdi. Waxay ahayd xaflad aad loosoo agaasimay oo qurux badan. Isha waan la raac raacay dadka meesha jooga. Dad dhalin yar iyo waayeel isug jira oo aan aqoonsaday, oo weliba badankoodu ay ahaayeen haldoorka Somaliland ee UK, waxay u badnaayeen rag ay Masuulka isku hayb yihiin iyo rag ay madaxweynaha sumad wadaagaan. Lama yaabin, waayo waa dhaqan ay la wadagaanlabda xisbi ee kale ee Waddani iyo Xisbiga uu madaxa ku sito Mr. Faysal Cali. Waxa se aad iiga yaabisay markii aan lasoo fadhiistay dhalinyar aanu asxaab nahnay oo hogaanka xisbiga la dhacsanaa. Waa dhalinyar aanu is hayb naqaanay. Mid ka mida ayaan si kaftan ah ugu idhi, ”Saaxiib sanadkan wasiir waxka yar laguu magacaabi maayo.” Inta uu dhoola cadeeyey ayuu iigu jawaabay:”May sxb anigu ma rabo wasiirnimo iyo xil kale toona. Keliya waxan rabaa qandaraasyada hadhow la bixin doono in aan wax ka helo. Meeshaas ayaa ka wacan wasiirnimada.” Hadalkaas saaxiib kay wuxu maskaxdayda dib ugu celiyey dardaarankii 4 sano ka hor adeerkay isiiyey. Aniga oo aan dareensiin isaga, si aanan farxada xaflada uga xumeyn, ayaan u dhoola cadeeyey madaxana u ruxay. Qalbiga lakin waan ka murugooday waxaanan sawirtay dhaxalka foosha xun ee jiilkii naga horeeyey nooga tegeen.
Maanta haddii aad si toosa u daraaseysid hanaanka xisbiyadeena waxa kuusoo baxaya in nin waliba ninkii xigay la saftay. Tusaale fog adiga oo aan ka eegin, u fiirso madaxda xisbiyada cida u ah xoghaynta, cida mar walba daba taagan ee ay sida dhow u aaminsanyihiin. Mid waliba kooxdii ay is xigeen ayuu wataa. Waase wax ay iyaga raganimadoodu siisay mar haddii ay siyaasadoodii qabiilka ku saleesneed hanatay maskaxdii dhalinyarada lagu tabcay ee wakhtiga iyo maalka la geliyey.
Toos aan kuula hadlo muwaadin. Gaar ahaan toos aan kuula hadlo haddii aad tahay wiil ama gabadh dhalinyar ah oo reer Somaliland ah. Meel wal oo aad dunida ka joogtid waxa aad leedahay boq cadaas yar ee geeska ku taala. Waa meel Illaahay kugu beeray oo aadan iyada meel aan ahayn hurdo fiican ku ladaynin. Meeshaas yar ee aynu wada jecelnahay hawadeeda iyo cadceedeeda, xaalada ay ku sugantahay cida keliya ee waxka bedeli kartaa waa adiga. Cid kale oo ay sugaysaa ma jirto.
Sidaas si la mida, adiga ayay ku sugaysaa hooyada miskiinada ah beerta ku falata Wajaale iyo hooyada miskiinada ah ee khudaarta ku iibisa Ceerigaabo, ee subax walba u kalahaya siday usoo heli lahayeen bariiska ay cuni lahaayeen caruurta agoonta ah ee aabayaashood dagaaladii sokeeye ku geeriyoodeen. Miskiinka maskaxda waxka qaba ee suuqyada Laascaanood iyo Hargeysa dhex ordaya ee aan haysan cid daryeesha, adiga ayuu ku sugayaa. Adiguna haddii aad adeerkaa si qabyaalada ku taageertid, qiyaamaha dadkaas masaakiinta ahi cida ay xaqooda su’aali doonan ayaad qayb ka noqon.
Waxa aynu nahnay dad lagu qiyaaso 4 milyan ama ka yar. Magaalada London dadka ku nool ayaa laban laab inaga badan. Haddana cidhiidhi iyo diiqad ayaynu dareenaa marka mid aan inala qabiil ahayni maqaaxi inala soo fadhiisto. Inaga oo hoosta ka barina in ma ruun Illaahay inaga ag kiciyo si aynu nefisno oo si kal furan uga sheekeesano arimaha siyaasada ee reerkeena.
Dal walba waxa heer gaadhsiiya dhalinyaradiisa. Taasu maaha mid inagu cusub maqalkeedu. Soomaaliland-na cida qayrkeed gaadhsiin karta ama kasii reebi kartaa waa inaga – dhalinyarta reer Soomaaliland ee daafaha dunida ku kala nool.
Ugu dambayntii, maqaalkan yara dheeraday uma aan soo qorin in aan cid ku ceebeeyo ama cid ku faadh faadho, keliya waxa aan usoo qoray in aan guto waajib i saarnaa. Waajib kaas oo ahaa waajib Illaahay dusha iga saaray oo ah in wixii xun ee aad arkayso aadan ka aamusin. Waxa aan arkaana waa dhalinyaradii Somaliland oo u kala beratamaya sidii mid waliba adeerkii uga dhaadhicn lahaa dadka in uu yahay ka ugu wanaagsan ee la dooran karo. Dabcan qofku adeerkii wuu taageeri karaa si aan qabyaaladi ku jirin, laakiin waa haddii aad haysid sababo cad oo Illaahay kugu ogyahay oo aad kaga door bidaysid siyaasiga kale ee sharaxan. Haddii ay wacnaan lahayd in qabiil wax lagu doorto, Nuurkii ina abuurtay ayaa ina fari lahaa. Waa hoog iyo jab aad u badheedheysid, adduun iyo aakhiraba, in aad qof ku dooratid qabiil. Waa su’aal lagu weydiin doono maalinta dambe oo ay ka jawaabisteedu adkaan doonto. F.G: Ugu horeyn akhriste ku mahadsanid wakhtigaaga qaaliga ah ee aad u hurtay akhrinta maqaalkan. Marka xigta aan ka afeefto in aanay ujeedada maqaalkani marnaba ahayn ceeb u samayn ama dhaliilid siyaasiyinta iyo xisbiyada aan ku magacaabay qoraalkan. Mid waliba wuxu iga mudanyahay xushmad iyo ixtiraam. Mahadsanid.
W/Q: Mohamed Omar (Sammo)